Ukuvula amakhaya ngamaxesha obunzima
Sisebenzisana nentsapho yethu ukuze sinikezele ngezindlu ngexesha likaxakeka, ukususela kwiintlekele zendalo ukuya kwiCOVID-19.
Ngabantu abayi-75,000 abafumene iindawo zokuhlala ngexesha lobunzima ukususela ngo-2012.
Emhlabeni wonke, ababuki zindwendwe baka-Airbnb banikezela ngoncedo xa kanye lufuneka kakhulu. Dibana nabantu ababangela kukwazi ukwenzeka oku.
Iintsapho ezijamelene nobunzima
Xa kwehle intlekele, kubalulekile ukuba nendawo yokuhlala etofotofo. Iinkqubo zethu zinceda abantu badibane nabanye basekuhlaleni baze bafumane indawo ngexesha lobunzima. Dibana noJorge noLaura
Uluntu oluchatshazelwe ziintlekele
Sinika abahlali indlela yokumanyana xa kusehla iintlekele. Besebenzisa iinkqubo zika-Airbnb.org, abantu bangavula amakhaya abo simahla, bewavulela abamelwane abadinga indawo yokubalekela. Dibana noBob kunye noJuan
Iimbacu ezifudukela kwilizwe elitsha
Iimbacu nabantu abafuna indawo yokhuseleko bangafumana ubunzima obuninzi xa befudukela kwilizwe elitsha. Ukuba nendawo yokuhlala yokwexeshana engabhatalwayo kubenza baphole engqondweni ngoxa beqalisa ubomi obutsha. Ngu-Els noFode aba
Oonesi abatshotsha phambili ekulweni iCOVID-19
Ngexesha likabhubhane abasebenzi bezempilo bekufuneka bahlale kufuphi nemisebenzi yabo kodwa babe bekude kwiintsapho zabo ukuze zikhuseleke. Ababuki zindwendwe bakwa-Airbnb emhlabeni wonke baye babanika iindawo zokuhlala. Dibana noChiara, uBrandi noJi
Abasebenzi abanceda ngexesha lentlekele abanikela ngoncedo lwexesha elide
Kungathatha iminyaka ukuba ingingqi iphinde ilunge ngokupheleleyo emva kwentlekele enkulu. UAirbnb.org uncedisa ukubhatalela iindawo zabasebenzi abancedisa ekwenzeni umsebenzi obalulekileyo wokwakha iingingqi kwakhona. Dibana neqela lakwaMercy Corps
Sinceda eminye imibutho engenzi ngeniso ibe nefuthe elihlala lihleli.
Dibana nemibutho embalwa esisebenza nayo eye yanceda ekwenzeni iAirbnb.org.
I-IMC inikezela ngeenkonzo ezingxamisekileyo zamayeza noncedo oluhambisana nawo kwabo bachatshazelwe ziintlekele kwihlabathi liphela, ibe ibonelela abantu ngoqeqesho abaludingayo ukuze bakwazi okohlukana nokukhongozwa baze bazimele.
I-IRC isabela kwezona ngxaki zimbi ezisongela ubomi babantu emhlabeni wonke, kwaye inceda abantu ubomi nempilo yabo eye yachatshazelwa kakubi yimilo nazintlekele ukuba baphile, bachache baze bakwazi ukuqhubeka nobomi.
I-HIAS ngumbutho wamaYuda ongajonganga kwenza nzuzo osemhlabeni wonke okhusela nonceda iimbacu, abantu abafuna indawo yokhuseleko, nabanye abantu abasuswe ngenkani kwiindawo zabo ehlabathini jikelele.
U-Build Change ngumbutho onqanda iintlekele, onceda xa zehlile noyila izindlu ezomeleleyo noluntu lwasekuhlaleni.
I-CORE iyakhokela ekulungiseleleni intlekele, ukunceda xa yehlile nakwiinzame zokuhlangula uluntu oluchaphazelekileyo okanye olusemngciphekweni wentlekele.
I-The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
I-IFRC yeyona inabantu okanye imibutho encedayo mininzi, equka iNational Red Cross neRed Crescent Socities eyi-192 esebenzela ukusindisa ubomi babantu ize ikhuthaze ukuphathwa kwabo ngesidima emhlabeni wonke.
Xa sibambisene, sinokwakha kwakhona.
Ngo-Agasti 2018, uthotho lweenyikima lwasithwaxa kanobom isiqithi sase-Indonesia, iLombok. Abasebenzi boncedo bakwaMercy Corps bathunyelwa ukuba bayokunikela ngoncedo kuloo ndawo, ibe bafumana intsapho nendawo yokuhlala efanelekileyo.
Ngamaxesha obunzima, imali onikela ngayo inceda abantu bafumane indawo abaza kuthi likhaya.
Joyina ababuki zindwendwe abangaphezulu kwe-100,000 uze unike abantu indawo yokuhlala simahla xa kanye beyidinga.
© 2021 Airbnb.org, Inc. Imvume yeyethu
ipolisi engezinto eziyimfihlo